Ukuphinda usebenzise: Itekhnoloji ye-imeyile ebukhoma | Martech Zone
Ukuphinda usebenzise: Itekhnoloji ye-imeyile ebukhoma
NgoLwesine, uJanuwari 21, 2016 NgoMvulo, Meyi 16, 2022 Douglas Karr
Ishishini le-imeyile lineengxaki ezimbini eziphambili ngokuqhubeka nokusetyenziswa kokuthumela i-imeyile:
zobuqu Ukuthumela umyalezo ofanayo, ngaxeshanye, kubo bonke ababhalisi bakho be-imeyile abafumani myalezo ulungileyo uye kwixesha elifanelekileyo kumamkeli ofanelekileyo. Kutheni le nto uMarianne, oneminyaka engama-24 ubudala, eza kufumana izibonelelo ezifanayo nezikaMichael, oneminyaka engama-57, ngelixa benomdla kwizinto ezahlukeneyo? Njengokuba umamkeli ngamnye ahlukile, ngokunjalo kufuneka umyalezo ngamnye. Ii-imeyile ezizezakho zisa amaxabiso aphezulu entengiselwano amaxesha amathandathu, kodwa iipesenti ezingama-70 zeempawu ziyasilela ukuzisebenzisa ngokwe U kuThengiswa.
ingqalelo – Ixesha lenye ingxaki yokuthumela iposi ngobuninzi. Nokuba umxholo we-imeyile ungowomntu, zonke ii-imeyile zithunyelwa ngaxeshanye kuye wonke umamkeli. Oku kwenzeka ngaphandle kokuba umrhumi ngamnye abe neendlela ezahlukeneyo zokuphila, imikhwa, okanye iindawo zexesha. Ngokuyithumela kwangaxeshanye, inkampani ngokuqinisekileyo iya kuphoswa ngabantu abaninzi abanokuba babenomdla kunikezelo kodwa bayifumene ngaphandle kwefestile yothethathethwano.
Ukulungiswa kwexesha lokuthumela kunokubangela ukuphuculwa kwe-22% ekubandakanyekeni kwe-imeyile.
Ukuthengisa nge-imeyile isijelo esithandayo esidweliswe ngabathengi ukufumana unyuselo kwiimpawu abazithandayo. Iinkampani ziyazi ukuba ke ziyaqhubeka nokuthumela ii-imeyile ezininzi kodwa ukhuphiswano kwibhokisi lemiyalezo engenayo luqhubeka luba nzima yonke imihla, ukunqongophala kokufaneleka kwee-imeyile kuyonakalisa ngokwenene imbuyekezo kutyalo-mali lweempawu ezizithumelayo.
Ukusombulula iNgxaki yokuPoswa kweMisa
Abathengisi bazamile ukwenza imikhankaso yabo yokuthengisa nge-imeyile ngokufaka nje amagama ababhalisile kumyalezo okanye kumxholo wesifundo. Umbono apha yayikukwenza ukuba umamkeli azive ukuba i-imeyile iyilelwe kwaye yathunyelwa kuye kuphela. Nangona kunjalo, abamkeli abakhohliswa ngokulula… ngakumbi xa umxholo we-imeyile ungalungiselelwanga bona.
Abathengisi banedatha eninzi kumbhalisi ngamnye namhlanje kunangaphambili. Ngelishwa, abayazi indlela yokuyisebenzisa ngokupheleleyo okanye banesixhobo esinamandla ngokwaneleyo ukuba singasisebenzisa. Mhlawumbi umba awuzange ube ngabathengisi, bekukho kuphela amaqonga e-imeyile asemgangathweni afumanekayo. Ukunceda iphuhlise imveliso enamandla, kodwa enomdla evumela amaqela okuthengisa ukuba asebenzise ezi datha ukuthumela ii-imeyile ezilungileyo, ngexesha elifanelekileyo, kumbhalisi ngamnye.
Ukunceda Itekhnoloji ye-imeyile ephilayo ehlaziya imeko yokuvula kunye nokuziphatha komamkeli ngamnye ukuhambisa umyalezo ngexesha elifanelekileyo kwaye ubonise owona mxholo ubalulekileyo ngexesha langempela.
Ekuvuleni nganye kwe-imeyile, i-Reelevant itshintsha umxholo womyalezo ngexesha lokwenyani kumamkeli ngamnye kuxhomekeke kwisixhobo, indawo kunye nemozulu kwindawo kunye nexesha elinikiweyo. Iwebhusayithi yentengiso ye-e-commerce, umzekelo, iya kuba nakho ukumisela umkhankaso wayo wokubonisa iingubo zemvula kunye neebhulukhwe ukuba kuyanetha xa umamkeli evula i-imeyile, kunye nezikipa kunye neebhulukhwe ezimfutshane ukuba kuyatshisa xa umamkeli evula le imeyile kwakhona.
Ukuphinda sisebenze siphume ekuthumeleni ubunzima ngokuthumela ngokuzenzekelayo ii-imeyile ngamaxesha ahlukeneyo kumbhalisi ngamnye. Ukuchonga elona xesha lilungileyo lokuzibandakanya nomntu ngamnye kubo, ii-algorithms zeqonga zihlalutya indlela abaziphethe ngayo kunye nemikhwa yabo nge-imeyile nganye abayifumanayo. Iimeyile ezininzi ezithunyelwayo, kokukhona isicelo sikrelekrele.
tags: yitsale uyiwiseTsala kwaye ulahle umakhi we-imeyileUmxholo onamandlaukwenziwa kwe-imeyileukuthumela ixesha le-imeyileNgokwezifisoiluncedoukuthumela ixeshathumela ukusebenza kwexesha
I-CloudCraze: Iplatifomu ye-Ecommerce eyakhelwe i-Salesforce